Uchwepheshe we-Semalt Uveza Umhlahlandlela Wendlela Yokuqeda Ugaxekile Ku-Google Analytics
Ukugaxekile kogaxekile kubhekwa njengendlela yokudlulisela ukukhohliswa kokukhohlisa njengoba kubhalwe umbiko we-Google Analytics. Kuyinto engalungile ngoba ayidalwa ngabantu bangempela kodwa nge-spam bots. I-bot wuhlelo lwezinhlanzi olwenzelwe ukukhiqiza umsebenzi ophindaphindiwe. Ngakho-ke, labo abakhelwe ukudala imilayezo yogaxekile kuthiwa yi-spam bots. Ngokuvamile basebenzisa amakhanda okudlulisa amehlo aphethe ama-URL afihliwe aqondisa abasebenzisi kwisayithi lapho i-Google ibese ithatha njenge-backlink ezuzisa i-spammer yodwa njengoba iphakamisa izikhundla zabo zokucinga.
Umphathi Wezokuthuthukiswa Kwemakhasimende Aphezulu Semalt , u-Artem Abgarian, uchaza indlela yokulwa nalezi zihlaselo eziyingozi zokugaxekile.
Amabhuzu amahle kanye namaBots Bad
Amabhande amahle ayakhayo ngenkathi ama-bad ama-tend ayenokulimaza.
amabhuzu amahle. Inhloso yabo ukuhamba ngolwazi oluningi ngangokunokwenzeka, futhi babuyele ngembiko esebenzisekayo esiza abasebenzisi. Yenza ibhubhu elihle. I-Googlebot ibhodlela elihle elisetshenziselwa ukukhasaza ngamawebusayithi nokukhwabanisa okuqukethwe
amabhuzu amabi. Lawa yibobhu abanezinhloso ezinonya.
i-Botnet. Lezi uchungechunge lwekhompyutha ehlangene, konke okutheleleke..Zisetshenziswa ngumhlaseli ukuze athole ukungena emthethweni kwikhompyutha yomsebenzisi ngoba basebenzisa amakhulu amakheli ewebhusayithi ayenawo.
Kakade, sinikeza ubufakazi bokuthi u-spam wokuthunyelwa kanye nama-spambot uthola kanjani amakheli we-imeyili futhi uhlaziya imibiko yokuhlaziywa. Noma kunjalo, umgomo wabo ongahle ungabangela umonakalo omkhulu, ikakhulu uma umthuthukisi efisa ukuthelela iwebhusayithi nge-malware, iTrojans, noma amagciwane. Kwezinye izimo, bangenza ikhompiyutha ibe yingxenye yebhokisi. Ochwepheshe bacebisa ukuba ungalokothi uchofoze kumawebhusayithi asolisayo njengoba abaduni bewasebenzisa ukufihla i-malware. Uma ikhompyutha iba ingxenye yebhokisi, abaduni bangayisebenzisa ukuthumela ugaxekile noma i-malware kubantu abathintana nabo. Kusho ukuthi ukuvimbela yonke uchungechunge lwe-botnet kunganciphisa abanye abasebenzisi bangempela kusukela i-hacker ibaphoqa kwinethiwekhi ye-botnet.
Izingosi ezikhungethweyo kuphela ezihlaselwa ama-spambots. Ukuze abasebenzisi bakwazi ukuzivikela ekuxhashazweni, badinga ukuqeda amawebhusayithi abo. Ngokuyinhloko, izinhlelo zokubamba ezishibhile ezishibhile, kanye namathrekhi angokwezifiso ezitolo zithengiswa kakhulu.
Okulandelayo uhlu lwezinto abasebenzisi abangayenza ukuze balahle ugaxekile:
Funa zonke izixhumanisi zokudlulisa ngamaphesenti angu-100 noma ama-0% ahlasele amazinga anesisindo ezingaphezu kweshumi. Njalo uqinisekise ubunikazi babo kwi-intanethi. Uma beyi-spam referrals, sebenzisa isihlungi esenziwe ngokwezifiso.
Vimbela umthumeli kusuka kuma-spambots usebenzisa ifayela le-.htaccess futhi ungeze ikhodi ukuvimba ikheli.
Vimbela ikheli le-IP elisetshenziswa ama-Spambots ngokungeza ikheli le-IP elisetshenziswa yi-hacker.
Umuntu angasebenzisa uhla lwamakheli e-IP athatha isikhala esingaphansi kokuvimbela ngabanye.
Vimbela ama-agent abasebenzayo
Sebenzisa isici sesihlungi se-Google Analytics
Vumela i-firewall yekhompiyutha ebeka isihlungi emkhatsini wekhompiyutha yomsebenzisi kanye ne-intanethi.
Uma kukhona usongo kusuka ebhodini entsha, njalo uxhumane nomqondisi.
Sebenzisa i-Google Chrome njengesiphequluli esizenzakalelayo njengoba ithola i-malware ngokushesha kunabanye.
Izixwayiso zangokwezifiso ku-Google Analytics nazo zisiza ukucacisa ukuthi kunini i-spike emsebenzini.
Thola ukuhlolwa kokungena lapho behlaziya khona iwebhusayithi nganoma yikuphi ukukhubazeka.